Saturday January 21, 2017 - 21:47:31 in Wararka by Xarunta Dhexe
"Sucuudigu; wuxu is huwiyey magaca diinta iyo ka Sunniga ahba isagoo ka dhigay inu masuul ka yahay Sunni wal oo dhibataysan, sida uu habeenkii dhawayd sheegayey ba boqorka waagi dhawa dhaxlay jagada boqornimo ee Sucuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdi
"Sucuudigu; wuxu is huwiyey magaca diinta iyo ka Sunniga ahba isagoo ka dhigay inu masuul ka yahay Sunni wal oo dhibataysan, sida uu habeenkii dhawayd sheegayey ba boqorka waagi dhawa dhaxlay jagada boqornimo ee Sucuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdicasiis, "Sucuudigu Sunniga meel walba oo u joogo waa ka masuul." Hadalka sidaa u dhigani talow ma mid diineedba mise waa mid siyaasi ah? Bal adba!
Waxa marag ma doon ah in xasuuq lagu hayo Sunniga Suuriya oo shiicada xukunka haysa da’ walba gumaaday, waliba koox Shiiceedka Bashaar Asad madaxweynaha Suuriya uu yahay Ismaaciili oo culimada Sunnigu kaba saaran kooxda diinta Islaamka.
Dalka Ciraaq sida Sunniga maalin walba loogu laayo uma baahna caddaymo, labadaa dalba Sucuudigu ragga xukunka haysta ee Shiicada ah xidhidh wanaagsan buu la leeyahay. Marka laga yimaado xamxamta hoose oo odhanaysa ‘dagaalkii Suuriya Shiicada ayuu garabka saarayey, isagoo Ikhwaanka ka didsana’.
Ku darsoo bilowgii kacdoonada Yemen ee da’yartii Ikhwaaniinta ahayd bilaabeen Sucuudigu wuxu la safna ragga uu maanta diyaaradaha ku duqaynayo, yadna waa xaqiiqo aan sacab lagu qarin karin.
Sannadkii 1962kii dagaal dhex maray dawladda Masar iyo kooxdan waxa la ogaa taageeradii reer boqor siinayeen raggan iyagoo u arkayey inay Ikhwaanka ka horjoogaan.
Hadda waxa soo baxday is difaac Sucuudiga kooxo wadaado ahii ku difacayaan wererkaa oo leeyihiin waa mid diimeed. Marka la yidhaa waar hadduu diin u dagalamayo muxuu ugu hilin waayey Sunniga Suuriya iyo Ciraaq ayey la soo boodayaan, "Nidaamka sharciga ah ayuu maray oo dawladda Yemen madaxweynihii sharciga ahaa ayaa la riday oo dawladdi sharciga ahayd ayuu difacaya, halka kuwaasi dawladihii sharciga ahaa wali taagan yihiin." Waa si wanaagsan ee waagi Mursi laga tuuray xukunkiisi sharciga ahaa ee waliba doorashada ku yimi sooki Sucuudigu taageeray askartii inqilaabka samaysay, bal adba! Marka laysku soo xooriyo dagaalkaasi maaha mid diineed ee waa mid siyaasadeed taasina waa runta biyo kama dhibcaanka ah.
Su’aasha kale ee is waydiinta leh baa ah horta yaa Sunni ah?. Kalmadda qeexisteedu waxa ay u dhacda; cidda raacda Kitaabka Quraanka Kariimka ah iyo habdhaqankii Rasuulka CSW in loogu yeedho Sunni. Asal ahaan adeegsigi ugu horreyey erayga Sunni waxa Culimada qaar soo guuriyaan in u isticmaalay Saxaabigii Cabdilaahi Ibnu Cabbaas Rc, mar u sharaxay aayad Qur’aan ah. Culimada sugista xadiiska ku horraysa sida Bukhaari, Ibnu Muciim, Al Madiini iyo culimo fara badan ayaa duray sugnaanta asarkaa Ibnu Cabbaas, iyaga oo ku duray ku jirista liiska warinta ninka la yidhaa Xasan Bin Abi Jacfar oo lagu tuhunsan yahay inu ahaa beenaale. Sidaa darteed noqon maayo asar iyo qawl la daliishado.
Waxa kale oo la sheega Taabicigii Xasan Al-Basri uu lahaa adeegsigaa Ehlu Sunna Wal Jamaaca. Isagoo u adeegsaday cidda raacda dhabbada Rasuulka CSW iyo Saxaabada Alle haka raalli ahaade.
Intaa haddii aynu kaga soo gudubno qeexista eraygaa waxa yadna is waydiin leh yaa ah Sunni?. cid kasta oo qaadda dhabbadaa shaki la’aan waa Sunni. Ugu horrayn waxa wadadaa ka leexday qolyaha maanta is huwantu baacsanayso ee Shiicada. Shiicadu; Fahan ahaan ayey uga leexden waddada Sunniga. Markaasa ummaddii u qaybsantay Sunni iyo Shiico. Waxana lagu kala leexday fahan iyo culimo; Shiicada culimo waxa u noqday qaar ka tagay fahankii toosna kana leexday dhabbadii Rasuulka CSW, kuna darsaday aflagadada biir-magaydada ummadda sida mudantii Saxaabada.
Intii ka soo hadhay Shiicadu waxa ay huwatay magaca Sunni. Mar dambe ayaa haddana si kala rifmay magacii oo maalinba qolo iska saaraysay magacaa; Muctasilada, Murji’ada, Jahmiyada, dee sii wad un illaa Ashcariyada/Ma’turiyada oo mararka qaar is huwada laga saarayba Sunnigii. Ku darsoo Ahcariyadu waxa ay sheegata culimo labeen ah sida Imaam Nawawi, Xaafid Ibnu Xajar, Salaaxudiin iyo qoloyin badan. In kasta oo sida aan aniguba qabo qof kasta oo arin/masalo ta’wila aanu noqon doonin Ashcari haddana xertaasi sheegato culimadaa. Dood kalaba tidhaa waagaa oo loo badnaa fikirkaa ayaa keentay inay noqdaan.
Isku soo xooriyo sidii maalinba qolo xayndaabkaa uga sii baxaysay ayaa hadda Sunnigiiba noqday khaanad boqortoyada Sucuudigu dadka ku ururiso mararka qaarna ka saarto."
W-Q. C/risaaq Rakuub.
Madaxweynaha Puntland oo Xil cusub magacaabay (Wareegto)
02/10/2018 - 11:37:38